Led Lighting 150lm halkii watts UL liiska soo saaraha laydhka ee China
Nalalka Laydhka Gudaha
LED Wareer Dhuxul
Nalalka Barkadda LED-ka
Kor u qaadista Geedka Palm
Nalalka Mashiinka CNC
LED Wareer Dhuxul Laydh Muuqaal Nalalka Barkadda LED-ka
Taariikhda: 15 / 12 / 2016
Diode Dareeynta Iftiinka (LED) waa aalad semiconductor ah oo korantada u rogeysa iftiin. Iftiiminta LED-ka ayaa soo jirtay illaa iyo 1960-yadii, laakiin hadda waxay hadda bilaabaysaa inay ka soo muuqato suuqa la deggan yahay iftiiminta booska. Markii ugu horreysay LED-yada cad waxaa suuragaliyay oo kaliya kooxaha "qaanso-roobaad" oo ka kooban seddex leydh - casaan, cagaar, iyo buluug - iyadoo la xakameynayo kan hadda socda si loo helo iftiin guud oo cad. Heerarka caadiga ah ee 18 laydh LED ah Tani waxay is bedeshay 1993 markii Nichia ay abuurtay buluug indium gallium chip oo leh fosfoorso loo isticmaalo in lagu abuuro mawjadda wareegga ee lagama maarmaanka u ah in iftiin cad laga soo saaro hal diode. Nidaamkani aad ayuu uga jaban yahay qadarka iftiinka la soo saaray. Laydhka Led
Diode kasta wuxuu qiyaastii yahay 1/4 inji dhexroor wuxuuna adeegsadaa qiyaastii toban millips si uu ugu shaqeeyo qiyaastii tobnaad watt. LED-yada waa yar yihiin, laakiin waa la isugu geyn karaa codsiyada xoojinta sare. Qalabka LED-ku waxay u baahan yihiin darawal kaas oo u dhigma ballastinka isku dhafan ee laydhka. Darawallada waxaa caadi ahaan lagu dhisaa qalabka (sida ballasts-ka dhaadheer) ama iyagu waa kuwa wax lagu beddelo oo la qaadan karo. Transform-yada wax lagu rakibo waxay u oggolaanayaan qalabka inuu ku socdo heerka caadiga ah ee 120 volt alternating current (AC), oo leh xoogaa yar (illaa 15 ilaa 20 boqolkiiba) luminta korantada. Laydhka Led
Waxtarka aaladaha caadiga ah ee guryaha laydhka 'LED' waa ugu yaraan 20 lumens watt (LPW), in kasta oo waxtarka ilaa 100 LPW lagu abuuray goobaha shaybaarka. Nalalka iftiinka leh waxay leeyihiin waxtarka qiyaastii 15 LPW iyo tamarta istiraatiijiga ah ee tamarta leh ee 'ENERGY STAR®' waa qiyaastii 60 LPW, iyadoo kuxiran nooca watatt iyo nalka. Qaar ka mid ah soo saarayaasha ayaa sheegta wax-qabadyo aad uga sarreeya 20 LPW; hubi inaad eegto waxtarka nidaamka, kaas oo xisaabtamaya awoodda isticmaalka dhammaan qaybaha. Bishii Diseembar 2006, Waaxda Tamarta ee Mareykanka waxay daraasad ku sameysay waxtarka afarta nal. Afartooduba way ka hooseeyeen sheegashadii soo-saareyaasha; Daraasadu waxay tilmaamaysaa in soosaarayaashu ay ku tiirsan yihiin cabirrada inta iftiin ee leydh go'doon ahi soo saaro, halkii ay ka noqon lahayd inta iftiinka nalka LED-ka dhabtii bixiyo. Laydhka Led
LED-yada ayaa kaga fiican dhigista nalka jihada kaliya marka loo eego nalalka iftiinka ama nalka u ifaya. Sababtoo ah wax soo saarkooda jihada, waxay leeyihiin astaamo naqshad gaar ah oo looga faa'iideysan karo naqshadaha xariifka ah. Nalalka xargaha ee 'LED strip' waxaa lagu rakibi karaa hoosta miiska, hoolalka, iyo jaranjarooyinka; iskudhafyo urursan ayaa loo isticmaali karaa iftiinka qolka. Qalabka biyuhu xiraan, banaanka ayaa sidoo kale la heli karaa. Soosaarayaasha qaar waxay tixgeliyaan codsiyada sida jardiinooyinka, socodka, iyo qalabka qurxinta ee ka baxsan albaabbada garaashka inay yihiin kuwa ugu kharashka badan. Laydhka Led
Led Led way ka roon yihiin uguna adkaysi badan yihiin laydhadhka isku dhafan iyo nalalka dabka dhaliya. Nalalka LED-ka ma iftiimayaan. Waxay yihiin kuwo xasaasi u ah kuleylka; kuleylka xad-dhaafka ah ama codsiyada aan habbooneyn waxay si weyn u yareeyaan soo-saarka iftiinka iyo nolosha. Adeegsiga waxaa ka mid ah:
Hawlaha iyo nalalka akhriska
Nalalka jilicsan ee toosan (oo ka hooseeya qolalka jikada)
Nalalka iftiinka / saqafka
Nalalka / dibadda / iftiinka dhirta
Nalka iyo iftiinka socodka
Sifooyinka iyo gadaal
Nalalka gawaarida laydhka Qeexitaannada iyo Shuruudaha
Term Qeexid Halbeegyada Sida loo turjumo
color Heerkulka Midabka iftiinka Kelvin (K) Iftiinka qoraxda qorraxdu waa 1800K
100W Nalalka iftiinka iftiinka waa 2850K
Iskuxirka Sky waa 6500K
Heerka Suuq-furidda (CRI) Saameynta iftiinka midabka Miisaanka 0 ee 100 leh iftiinka qorraxda ee 100 Tirada sare, tirada "runta" midabka ayaa u eegi doonta iftiinkaas
Nuurkii Xoojinta iftiinka. Lumens Heerka sare ee lumen, iftiinka iftiinka
Power Tirada tamarta korontada ee la isticmaalo watts Hoos u dhig watta, hoos u dhigga tamarta
Waxtarka Waxtarka nalalka si uu korontada ugu rogo iftiinka Lumens per Watt Nalalka wax ku oolka ah waxay bixiyaan iftiin badan oo isticmaalaya tamar yar
← 150 lumen per watt Led Tube lights
Waddada mustaqbaleedka cusub-Tuba light light →
Naga daawo YouTube
LongNor Optoelectronics Co., Xaddidan
Ku dar: LiHe Industrial Zone, NanShan, ShenZhen, Shiinaha
Xuquuqda daabacaadda © 2007-2021 LongNor Optoelectronics Co., Ltd. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan